"Na-enweghị ndapụta", ihe ọhụrụ nke Noe Casado | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«Enweghị ndapụta», nke ọhụrụ nke Noe Casado
Izu ole na ole gara aga ọ rere ya na Isi, akwụkwọ mbipụta maka ịhụnanya na akwụkwọ ọgụgụ agụụ nke Planeta, nke kachasị ọhụrụ na Noe Di na Nwunye. Akwụkwọ ọhụrụ ya, nke aha ya bụ Enweghị ndaputa, na-agwa onye mbụ banyere ndụ anụ ọhịa nke nwanyị nke akụkọ dị ịtụnanya banyere ịhụnanya na mmekọahụ nwere mgbanwe gbanwere.
The protagonist, Bea, bụ a na-arụ ọrụ mama na a ụlọ oriri na ọ restaurantụ whoụ onye na-adịghị eche kpọrọ ihe ya ukwu. Akụkọ a bidoro ụbọchị ọ ga - amalite usoro esi agam n’ihu n’ọrụ ya, ebe ọ na - ezute otu nwoke nwere ezigbo onyekwu ya. Ma mmekọrịta ha esighi na mmalite dị mma. Nke a bụ ihe a ga-agụ na isi mbụ, nke na-etinye aka maka ịdị ọhụrụ ya na nke okike.
Nkọwa nke «Enweghị ndaputa»
N'ịbụ onye arụ ọrụ ya dị mma, Bea na-ejikọta ọrụ ya dị ka onye nri ụlọ nri na ndụ ezinụlọ ya. Jọ na-agwụ ya, n'agbanyeghịkwa na ọrụ okike ya agaghị enwe ekele maka ọrụ ya, ọ kpebiri ịdebanye aha na usoro nri.
Naanị nwoke nọ na ndụ ya na-achọ ịgbanwu afọ ise ma weghara oge ya n'efu. Ọ naghị eche onye ọ bụla ọzọ, yabụ ụbọchị na-aga, na-atụghị anya ihe ọ bụla pụrụ iche, n’amaghị na a na-eme ka akụkụ ya dị ka nwanyị banye n’azụ kaboodu ahụ.
Ya mere, ọ na-eche na ọ bụ na mgbe enyere ya ohere pụrụ iche ịgbanwe ụdị ahụ, ọ naghị eche na ya nwere ike iji onwe ya kpọrọ ihe dị ka o kwesịrị.
Ọ bụ ezie na ... otú iguzogide njem? Ruo otu oge na ndụ ya, Bea na-emechi anya ya wee hapụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị njikere imeghe ha ọzọ.
Banyere Noe Casado
Nwaanyị a si Burgos kwuru na ọ na-atọ ya ụtọ ịgụ ihe kemgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ha kwụsịrị ịmanye ya ịgụ. O biri n'ime ụwa nke onwe ya ruo mgbe Internetntanetị na ọtụtụ ebe edere akwụkwọ mere ọrụ ebube nke ịhapụ ya ka ọ kwuo banyere ihe masịrị ya ma soro ndị ọzọ kerịta echiche m.
Ọ bụrụ na akwụkwọ mbụ, Alụkwaghịm (The Machinist), hụrụ ìhè na June 2011. Nke abụọ, Elela m otu ahụ (Editora Digital), e bipụtara na dijitalụ usoro na March 2012; afọ nke m bipụtara nke ọma Abalị iri atọ na Olivia (Isi). Na akara ngosi dijitalụ Zafiro eBooks apụtawo N'echi y Gwa m mgbe, otu na ebe.
I nwere ike ịgụ isi nke mbụ nke Enweghị ndaputa ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » «Enweghị ndapụta», nke ọhụrụ nke Noe Casado
Cortázar's 'Hopscotch', n'etiti akwụkwọ ndị siri ike ịgụ
Nkọwapụta Tarragona 2015